Warbixin waa maxay Hagbad (Ayuuto) meeqa intee loo qeybiyaa? ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Bulshada Warbixin waa maxay Hagbad (Ayuuto) meeqa intee loo qeybiyaa?
Warbixin waa maxay Hagbad (Ayuuto) meeqa intee loo qeybiyaa?
Tashiga iyo taageero wadaaga waa mid ka mid ah hidaha dadkeena ee soo jireenka ah, Soomaalidana uga duwan tahay dalal badan oo dunida ah.
Marka aad maqasho magaca Ayuuto durba waxaa kugu soo dhacaya hanaan dhaqaalo aruuris ah oo haweenka Soomaaliyeed aad u isticmaalaan.
Ayuutadu waa hab tiro Haween ah oo mideysan intay dhaqaalo isugu darsadaan midba waqti qaadato, iyagoo adeegsada erayga lug oo isbuuca lug lacag ah ayuu qofi qaataa.
Ayuutadu waa mid saacidi karta Haweenka iyo qoysaska danta yar si kale hadaan u dhigo Ayuutadu waa shirkad dadban oo ku dhisan heshiis dhaqaalo wadaag ah, faa’ido badana ay ka helaan hadba kooxda Ayuutada ku jirta.
Ayuutada ayaa dumarka isticmaala waxey u qaybiyaan Saddex qaybood oo kala ah:- mid isbuucle iyo bile iyo mid sanadle ah, iyadoo Saddexdaasi qayboodna ay kala duwan yihiin, sidoo kale Ayuutada malahan qiimo u sharciyeysan oo mar walba Dumarka iyagu wada galaya ay ku dhaqmaan.
Ayuutada waxay ka mid tahay waxyaabaha soo jireenka ah oo intooda badan Haweenka caado u ah iyagoo Dumarka qaarkood masruufka uu seygeeda siiyo waxay uga baahan tahay marka ay ku qabsato inta kle haraadiga ah ayey Dumar kale kula shirtowdaaa si ay maalin ay u anfacdo.
Dumarka iyagu ku shirkooba ayaa sameysta qof hormuud u ah oo iyaga u haya lacagtaasi ay shirkada ku yihiin.
Haweenka badankood waxey isku raaceen in eysan jirirn wax khasaaro ah oo la gala kulmo balse waxay intaasi ii raaciyeen iney jirto marar aad u baahato si aad ugu dabarto meel markaasi kaa banaaan nasiib xumo ineysan aheyn doorkaaga dad badana aad shirka ku tahiin.
Sidoo kale waxay intaasi ku dareen in caqabadahasi oo kale markay kula soo gudboonto kaliya inaad ku xalin karto inaad ka codsato lugta doorkaan inaad qaadato qofka hormuudka u ah.
Ugu dambeyn Ayuutada ama Hagbada ayaa inta badan waxaa isticmaala dumarka iska danta yar, iyagoo biilkooda waxii baaqi uga soo noqday Dumar kale kula shirkooba si ay bari kamaalin ugu baxsato.
Previous articleBarcelona Oo Camp Nou Stadium Oo Maran Ku Garaacday Las Palmas Ciyaar Qarka U Fuushay In La Baajiyo
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay fal lagu laayay dad Ameerikaan ah.